Nhau - COVID 19 KUPONESA KWEMAHARA MELT ADHESIVE (HMA) MARKET 2020 TRENDING TECHNOLOGIES, ZVAKAITIKA, VADZIDZISI VAKAKOSHA NEZVAKAITIKA KU2025
Global Hot Melt Adhesive (HMA) YeMusika Yekutsvagisa Chirevo 2020: COVID-19 Kubuda Impact Kuongorora
The 'Hot Melt Adhesive (HMA) musika'rondedzero yekutsvaga yakanyorwa neBrand Essence Market Research inojekesa musika wakakodzera uye nzwisiso yemakwikwi pamwe neruzivo rwematunhu nerevatengi. Muchidimbu, chidzidzo chekutsvagisa chinofukidza zvese zvakakosha zveiyi bhizinesi nzvimbo inokanganisa maitiro aripo, chinzvimbo chekuita mari, share yemusika, saizi yemusika, kukosha kwenzvimbo, uye zvirongwa zvekuwedzera bhizinesi zvevatambi vakakosha mumusika weHotel Melt Adhesive (HMA).
Chirevo chekutsvagisa nezve Hot Melt Adhesive Market inoratidzira ongororo yakajeka pamatanho azvino emusika. Chirevo ichi zvakare chinosanganisira zvakadzama zvirevo pamusoro pehuwandu, fungidziro yemari uye kukosha kwemusika, izvo zvinowedzerazve chimiro chayo mune yemakwikwi nzvimbo uye kukura maitiro anotambirwa nevakuru maindasitiri vatambi.
Hot melt adhesive (HMA), inozivikanwawo seglue inopisa, chimiro chekunamatira kwe thermoplastic iyo inowanzotengeswa seyakaomeswa matanda eesilindrical emadhayamita akasiyana akagadzirirwa kushandiswa uchishandisa pfuti yeglue inopisa. Pfuti inoshandisa chinoramba chichiita basa rekudziya chinhu kuti inyunguduke glue repurasitiki, iro mushandisi anosundira nepfuti pamwe neanogadzira michina pfuti, kana nekumanikidza kwemunwe. Iyo glue yakadzvanywa kubva mumuromo unopisa unotanga kupisa zvakakwana kuti utsve uye kunyange ganda reblister. Iyo glue ine tacky kana ichipisa, uye inosimbisa mumasekondi mashoma kusvika miniti imwe. Zvinonamira zvinopisa zvinopisa zvinogona kuiswa nekunyudza kana kupfapfaidza.
Mukushandisa kwemaindasitiri, zvinopisa zvinopisa zvinonamira zvinopa zvakati wandei zvakanakira pamusoro peye solvent-based adhesives. Mhando dzakasarudzika dzemakemikari dzakaderedzwa kana kubviswa, uye nhanho yekuomesa kana yekurapa inobviswa. Zvinonamira zvinopisa zvine hupenyu hwakareba hwesherufu uye kazhinji zvinogona kuraswa pasina matanho anokosha. Kumwe kwekukanganisa kunosanganisira kupisa kwemhepo kweiyo substrate, kudzikisira kushandiswa kune substrates isinganzwisisike kune kwakanyanya tembiricha, uye kurasikirwa kwesimba kusungwa pakakwirira tembiricha, kusvika pakupedzisa kusungunuka kwekunamatira. Izvi zvinogona kudzikiswa nekushandisa chinhu chinonamatira chinoshanda mushure mekusimbiswa kunoenderera mberi nekuporeswa eg, nehunyoro (semuenzaniso, urethanes inoshanda pamwe nesilicones), kana kurapwa ne radiation ye ultraviolet. Dzimwe HMAs dzinogona kunge dzisingagone kurwisa nemakemikari uye mamiriro ekunze. HMAs hadzisi kurasikirwa nehuremu panguva yekusimbisa; solvent-based adhesives inogona kurasikirwa inosvika makumi mashanu-70% yehuremu hwakakora panguva yekuoma.
Mu2019, saizi yemusika weHotel Melt Adhesive (HMA) ndeye 7500 mamirioni US $ uye inosvika 11700 miriyoni US $ muna 2025, ichikura paCAGR ye6.6% kubva 2019;
Chekutanga pane zvese, kuwedzera kudiwa kweyekupisa kunyauka kunamatira kunotyaira saizi yemusika. Chechipiri, Musika unowedzerwa nekukura kunodiwa kubva kumakambani ekupedzisira-mushandisi sekunyora, kurongedza, kuvaka & kuvaka, kuveza huni, kusunga mabhuku, zvemota, zvisina kurukwa, kutakurwa & misika yeshangu. Pamusoro pezvo, maitiro akajairika ekuchinja kubva kune zvinonyungudika zvinonamira nekuda kwemhedzisiro inokuvadza yezvinhu zvisina kugadzikana zvemakemikari zvinopihwa kubva kune izvi zvinonamatira kana zvinonamira zvinotarisirwa kukurudzira kukura kwemusika panguva yekufungidzira. Kuenderera mberi kwekumanikidzwa kunopihwa nevemutemo vanoshanda vane masimba seEPA (Nharaunda Yekuchengetedza Agency) & REACH inotarisirwa kudzikisira mashandisirwo ezvinyungudiki zvinonamatira mukuyedza kudzikisira zvakashata mhedzisiro, zvichidaro zvichikanganisa iyo inopisa inyauka musika. Zvakare, chisungo chakasimba pasina chinodikanwa chekurapa glue mushure mekunge chashandiswa ndeimwe mukana wekuwedzera wekutangisa uye anodhura mashandisiro ekushandisa-ekupedzisira. Chechitatu, North America ine musika wakakurumbira wezvinonamatira zvinopisa uye inotarisirwa kuve nechikamu chimwe muzvitatu chekudiwa kwepasirese mumatunhu aya. Europe inotarisirwawo kuve nekukura kwakakura mumusika unopisa unonamatira panguva yekufungidzira. Central uye kumaodzanyemba kweAmerica zvakare inotarisirwa kuve nekukurumidza kukura.
Mune uyu mushumo, 2018 yakafungidzirwa segore rekutanga uye 2019 kusvika 2025 senguva yekufungidzira yekufungidzira saizi yemusika weHotel Melt Adhesive (HMA).
Chirevo ichi chinoongorora saizi yemusika wepasi rose weHotel Melt Adhesive (HMA), kunyanya inotarisa kumatunhu akakosha seUnited States, European Union, China nedzimwe nzvimbo (Japan, Korea, India neSoutheast Asia).
Ichi chidzidzo chinopa iyo Hot Melt Adhesive (HMA) kugadzirwa, mari, chikamu chemusika uye chiyero chekukura chekambani imwe neimwe yakakosha, uye zvakare inovhara iyo data yekuparara (kugadzirwa, kushandiswa, mari uye chikamu chemusika) nematunhu, mhando uye zvinoshandiswa. nhoroondo yekuputsa data kubva muna 2014 kusvika 2019, uye fungidziro kusvika 2025.
Kune makambani epamusoro muUnited States, European Union neChina, chirevo ichi chinoongorora uye kuongorora kugadzirwa, kukosha, mutengo, chikamu chemusika uye chiyero chekukura kwevagadziri vepamusoro, data rakakosha kubva muna 2014 kusvika 2019.